उफ् गर्मी ! जनकपुर र नेपालगञ्जमा धेरै | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
उफ् गर्मी ! जनकपुर र नेपालगञ्जमा धेरै
जेठ २८, २०७५ सोमबार ११:८:१३ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाडाैं – मनसुन भित्रिएपनि राम्रोसँग पानी नपरेका कारण देशभर गर्मी बढेको छ । शनिबारदेखि नै गर्मी ह्वात्तै बढेको हो । शनिबारको तुलनामा आइतबार झनै गर्मी थियो ।
सोमबार पनि बिहानैदेखि घाम चर्किएको छ । आइतबार जत्तिकै गर्मी हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । सोमबार बेलुकी पानी पर्ने भएकाले मंगलबारदेखि गर्मी केही कम हुने मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
पहाड र उपत्यकाको तुलनामा तराईमा गर्मी धेरै हुन्छ । अझ जनकपुर र नेपालगंजमा सबैभन्दा धेरै गर्मी छ । जनकपुरमा आइतबार तापक्रम ४०.४ डिग्री सेल्सियस थियो । नेपालगंजको तापक्रम चाहिँ ३९ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ ।
यस्तै धनकुटामा ३८.८, सिमरामा ३८.५, भैरहवामा ३८.२, , धरानमा ३७.९, विराटनगरमा ३७.८, दिपालयमा ३७, दाङमा ३५.६, धनगढीमा ३५ र वीरेन्द्रनगरमा ३२ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुगेको छ ।
काठमाडौंमा पनि गर्मी ह्वात्तै बढेको छ । आइतबार काठमाडौंको तापक्रम ३१.५ डिग्री सेल्सियस थियो । शनिबारको तुलनामा आइतबार शून्य दशमलव ५ डिग्रीले तापक्रम बढेको हो । पोखराको तापक्रम ३२.८ डिग्री सेल्सियस छ ।